Pamwe Nikkei akatadza kana iyo iPhone XR haina kutengeswa | IPhone nhau
Pamwe Nikkei akatadza kana iyo iPhone XR haisi kutengesa
Uye ndiwo mushumo uchangobva kuitika unobva anonyatso kuzivikanwa ehupfumi hweJapan mazuva ese Nikkei, inoyambira kuti mitsara yekugadzira yeFoxconn naPegatron ikozvino yave kudzikira kugadzirwa kweichi chigadzirwa chinonzi chinodaidzwa kutengesa gore rino.
Pamakumi matanhatu emitsara yekugadzira iyo yakagadzirirwa iyo iPhone XR, makumi mashanu atove "chete" achishanda., sekutsanangurwa neiyo Nikkei midhiya. Zvese izvi zvinoratidza kuti kutengesa kwemidziyo iyi hakuendi sezvanga zvichitarisirwa uye izvi zvinogona kuve dambudziko kune vagovana vekambani.
100.000 iPhone XR pazuva mashoma
Uye chokwadi ndechekuti iwo manhamba anobuda mukumiswa kweiyi mitsara yekugadzira iwo madhiraivhoni zviuru zana pazuva uye achiva netariro, izvo zvinosimbisa kuti haasi iwo manhamba akanaka. Pa Pegatron chirongwa chekuwedzera mitsara yekugadzira chakamiswa Uye izvi hazvina kunaka tichifunga kuti mazororo ave pedyo nekona.
Kufungidzira kwekutengesa kunoenderana zvakananga nevatengesi kune hafu yakanaka, asi kana idzi nhau dzichibva kumaketani ekugadzira ivo pachavo, seaya eFoxconn nePegatron, zvinhu zvinowedzera kukomba. Iyo yazvino kota haina kugonesa vagovana zvakawandisa Saka zvino Apple haicharatidze rumwe ruzivo nezvekutengesa kwechigadzirwa nekota. Izvi zvinokanganisa zvizere kufungidzira kwekutengesa kwekisimusi yazvino kota asi chokwadika, isu hatizomboziva zviri pamutemo data uye Apple ichakwanisa kutaura kuti kutengesa kuchiri kurekodhwa ...
Parizvino tinofanirwa kuwedzera kumushumo weNikkei, iyo data inouya kubva kuWistron firm, inova iyo iyo Apple inodzokera kana yawira mumitsara yekugadzira uye kuti mune ino kesi hapana mafambiro eiyo nyowani iPhone XR yemushandirapamwe weKisimusi. Pasina mubvunzo chidimbu chenhau icho chichafanirwa kuteverwa padhuze kuti chiongorore chokwadi, asi hachitaridzika kunge chakanyanya kunaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Xr » Pamwe Nikkei akatadza kana iyo iPhone XR haisi kutengesa
Movistar inoendesa iyo eSIM system muSpain chaizvo